Vondron’ny parlemantera maro an’isa : Mijoro hiaro ny ara-dalàna sy ny Lalàm-panorenana -
AccueilRaharaham-pirenenaVondron’ny parlemantera maro an’isa : Mijoro hiaro ny ara-dalàna sy ny Lalàm-panorenana
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny vondron’ny parlemantera maro an’isa sady manohana ny fitondrana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Noho izany indrindra, namoaka ny heviny ireo parlemantera maro an’isa avy amin’ny Antenimieram-pirenena sy Antenimieran-doholona omaly, tetsy amin’ny Hotel Carlton Anosy. Nampitondraina ny foto-kevitra « Fitoniana sy Fifidianana manaja ny Lalàm-panorenana » rahateo moa iny hetsika nataon’izy ireo iny.
Tamin’izany indrindra no niraisan’izy ireo hevitra sy namoahany ny fomba fijeriny ny fanakorontanana sy ny savorovoro ataon’ireo parlemantera vitsy an’isa mitarika ny olona hikomy etsy amin’ny Kianjan’ny 13 mey nandritra ny iray volana izay.
Nambaran’ny depiote voafidy tany amin’ny distrikan’Ambovombe, Milavonjy Philobert, tamin’izany fa mijoro hiaro ny ara-dalàna sy izay voarakitry ny Lalàm-panorenana ny vondrona parlemantera maro an’isa. « Tsy azo ekena mihitsy ny fihetsik’ireo solombavambahoaka vitsy an’isa etsy amin’ny Kianjan’ny 13 mey, izay manakorontana, manaratsy ary manitsakitsaka ny lalàna manan-kery eto amin’ny tany sy ny firenena. Tsy hiteraka voka-tsoa ho an’ny firenena velively ny fanakorontanana », hoy ny depiote Milavonjy Philobert.
Notsindrian’ny senatera Riana Andriamandavy VII ihany koa fa ampy izay ny rà latsaka sy ny fanaovana sorona ny vahoaka teto amin’ny firenena. Noho izany indrindra, hoy izy, izay misolo tena ireo parlemantera maro an’isa, tsy ekena intsony ny fanonganam-panjakana. Manampy izany, tsy manaiky ny fiverenan’ny fitondrana Tetezamita, izay efa namotika ny firenena ihany koa izy ireo, sns.
Nambara sy niraisan’izy ireo feo fa tsy eny an-dalambe sy amin’ny alalan’ny fanakorontanana velively no tokony hanehoan-kevitra fa eny amin’ny lapan’ny Antenimieram-pirenena.
Ankoatra izay, notsindrian’izy ireo mafy fa vonona hanohana ny fifidianana izy ireo, araka izay daty mivoaka hanatanterahana izany. Nohamafisin’ny senatera Olivier Rakotovazaha rahateo fa tsy misy afa-tsy ny fifidianana am-pitoniana ihany no lalan-tokana hamoahana ny firenena anaty krizy.
Ho an’ny depiote voafidy tao amin’ny distrikan’i Brickaville, Voanalaroy Ramahatodisolomanana, indray, dia nambarany fa hosihosen’ireo depiote 73 ny hasin’ny samboady saloran’izy ireo, ary manala-baraka ny parlemantera ny fihetsik’izy ireo etsy amin’ny Kianjan’ny 13 mey.
Ankoatra izay, notsindrian’izy ireo fa ny vondrona parlemantera maro an’isa dia manasa ny vahoaka tsy ankanavaka sy leo korontana mba hitafa amin’izy ireo eny amin’ny Coliseum, ny 26 mey izao.
Miditra amin’ny andiany faharoa ny fifaninanana basikety amin’ny “Festival Somaroho 2018”. Hetsika hotanterahina any Nosy-Be, ao amin’ny kianja mitafo, ny 28 jolay – 4 aogositra izao. Hiavaka ny fifaninanana amin’ity indray mitoraka ity satria ankoatra ...Tohiny